Qubanaha » Nuxurxka Khudbadihii ay Madaxda Soomaalida u jediyeen Shacbka Soomaaliyeed ee Uk.
Nuxurxka Khudbadihii ay Madaxda Soomaalida u jediyeen Shacbka Soomaaliyeed ee Uk.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK ayaa xalay xaflad mid ah oo soo dhoweyn u sameysay Madaxda Soomaalida ee ka qeyb galaya shirka London ee looga hadlayo arrimaha Soomaalida.
Munaasabadan oo aheyd mid si heer sare ah loo soo agaasimay, ayna ka qeyb galeen boqolaal, ayaa waxay meesha ka saartay tuhunkii iyo shakigii dad badan ka muujinayeen in xaflado gaar gaar ah loo sameeyo Madaxweynaha iyo kuwa gobolada.
Waxaa Munaasabada lagu soo bandhigay suugaan kala duwan, iyadoo ay is bar bar fadhiyeen Madaxweynaha iyo 5-ta Madaxweyne Goboleed.
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas oo khudbad cajiib ah ka jeediyay Xaflada ayaa caddeeyay in socodkooda London aanu aheyn mid tafaraaruq ah, maadaama ay Madaxweynayaal yihiin.
“Socodkeena tafaraaruq ma ahan, waa midnimo Soomaaliyeed, oo nagu hoggaaminayo Madaxweynaha, taas ayaa u nimid london, waxaa diyaar u nahay anagoo soomaali ah, anagoo meel u wada jeedno, inaan ka shaqeyno midnimada , karaamadeena iyo sharafteena”ayuu yiri C/wali Gaas.
Sidoo kale Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay in wanaaga uu ku haray qurbo joogta, balse iyaga uu ku dambeeyo wali qabiilka, waxaa uu ugu baaqay inay Midnimada ka shaqeeyaan.
Waxaa uu sheegay in isaga aanu ka mid aheyn dadka aaminsan Federaalka, iyo Madaxweynayaasha fara badan, isagoo xusay in laga bixi doono Madaxweynayaasha faraha badan.
Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in Midnimo iyo walaalnimo ku wada socdaan, isla markaana uu hoggaaminayo Madaxweyne Farmaajo.
Cali C/llaahi Cosoble Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa sheegay inay ku wada socdaan hal hadaf, isla markaana Soomaaliya ay tahay mid, Hal Madaxweyne ay leedahay, waxaa uu tilmaamay inay ku daba feylan yihiin Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ugu baaqay qurba joogta inay qabiilka ka haraan oo ay Midnimo ka shaqeeyaan.
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay gaba gabadii xaflada, waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda la garab istaago, isla markaana la iska dhaafo qabiilka iyo qurunkiisa.
“Anaga adeegayaal idin nahay idinka leh dowlad, waa inaad garab u noqotaan, garab istaagtaan oo aad ka tagtaan qabyaalada iyo dhibkeeda”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa sheegay inay ku mideysan yihiin sidii dalka loogu soo dabaali lahaa amni iyo nabadgelyo, isla markaana Al-Shabaab laga saaro dalka oo dhan.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa balan qaaday in siyaasad mideysan oo aan is qab qabsi laheyn ku shaqeyn doonaan, taasna laga dareemi karo wadajirkooda maanta sida uu yiri.
“Waxaa balan idin ka qaadnay Siyaasad mideysan inaan ku howl galno, is qab qabsi aan laheyn, oo wada shaqeyn leh, laga soo bilaabo madaxweynaha. Ra’iisul Wasaaraha, Xukuumadda, Baarlamaanka iyo dowlad goboleedyada, sida aad caawa u jeedaa”ayuu yiri Madaxweynaha.
Maanta oo Khamiis ayaa lagu wadaa inuu furmo shirka looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, waxaa shir guddoomin doona Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha Britain iyo Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey.